သင်၏ Ubuntu ပေါ်တွင် Print Screen ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းကို clipboard သို့ကူးယူတော့မည်မဟုတ်လော။ ဒီတော့မင်းဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ် Linux မှ
ဣဇာက်သည် | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Ubuntu 18.x မတိုင်မီဗားရှင်းများတွင် Capture app ကိုကျော်။ Print file ကို clipboard သို့ကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်အမည်နှင့်မဆို image file ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုရန် Print Screen key ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော် Ubuntu ၏မူကွဲအသစ်များတွင်ဂရပ်ဖစ်အပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ယခု app သည်တည်ရှိကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည် Screenshot သငျသညျပြproblemနာမရှိဘဲဆက်လက်သုံးနိုင်သည်ကို။
၎င်းကိုသင်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်မကြာခဏအသုံးပြုရန်အတွက် launcher ၌မထားပါကအနည်းငယ်ပင်ပန်းသည်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုသင်နှိပ်လျှင် ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင် ဘာမှမမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာသည်။ အလိုအလျောက်လုပ်သောအရာသည်ဖမ်းယူထားသောပုံရိပ်ကိုသင်၏နေအိမ်လမ်းညွှန်ရှိပုံများလမ်းညွှန်တွင်သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ နောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်သိမ်းဆည်းလိုပါက၎င်းသည်အသုံးဝင်သည်။ ဒါပေမယ့်များစွာသောလူ, ငါကဲ့သို့သော, တည်းဖြတ်ရန်ယခုအချိန်တွင်အသုံးပြုပါ။
ထိုဖြစ်ရပ်များတွင်စနစ်ဟောင်းသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျသည်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် Print Screen ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Screen ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူပြီး Clipboard မှာချန်ထားပေးတယ် မည်သည့်ပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြန်လည်တင်ခြင်း application သို့မဆိုချက်ချင်းပွားနိုင်အောင်၊ ၎င်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ GNOME desktop ပေါ်ရှိ default keyboard shortcut များကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရုံ ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ:
အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ configuration ကို သင်၏ Ubuntu 18.x နှင့်အထက်ရှိ system ကိုသုံးသည်။
ဘက်ခြမ်းတွင်, ရွေးချယ်စရာတို့တွင်ရှာပါ devices များ.
ယခုကီးဘုတ်ဆက်တင်များထဲမှတစ်ခုကိုတွေ့ပါ အဆိုပါ screenshot မှသက်ဆိုင်ရာနှစ်ခုလယ်ကွင်း ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဓိကပုံမှာပြထားတဲ့ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းတွေအတွက်။
မင်းမြင်လိမ့်မယ် စကရင်ပုံကိုကူးရန်ကော်ပီကူးပါ, ထိုဖြတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ် Ctrl + ပုံနှိပ်ခြင်းမျက်နှာပြင်။ ဤအတောအတွင်း၌တည်၏ ပုံရိပ်များအတွက်ဖန်သားပြင်တစ်ခုသိမ်းဆည်းပါ တစ်ယောက်တည်းထားတယ် ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်။ သင်လုပ်သင့်သည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ ထိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်သင်ပြင်ဆင်လိုသောသော့သို့မဟုတ်သော့များကိုတို့ထိရန်သင့်အားပြတင်းပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် Print Screen ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုဒုတိယရွေးစရာတွင်၊ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက် Ctrl + Print Screen ကိုတစ်ပြိုင်တည်းနှိပ်ပါ။
ယခု မှစ၍ စခရင်ကိုနှိပ်သည့်အခါတိုင်းတွင်သင်ဖမ်းယူနိုင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း ၎င်းကိုမည်သည့်ဆွဲချအက်ပ်သို့မဟုတ်ရုံးစာရွက်စာတမ်းတွင်မဆိုကူးထည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » သင်၏ Ubuntu ပေါ်တွင် Print Screen ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းကို clipboard သို့ကူးယူတော့မည်မဟုတ်လော။ ဒါဆိုခင်ဗျားကဖြေရှင်းလို့ရတယ်
မာရီယို Anaya ဟုသူကပြောသည်
neophyte တစ်ယောက်ရဲ့မေးခွန်း၊ ဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတာလဲ၊ အခုသင် configuration ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်ရမယ်။
လုံခြုံရေးတိုင်းတာမှုနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုမသိရန်အလို့ငှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သည့်စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုလဲ ... Capture screen နှင့်အသုံးပြုထားသောသူတို့အတွက် keyboard shortcuts တွေကိုထားခဲ့ပါ။
၎င်းတို့သည် linux မှပြတင်းပေါက်သို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောအရာများဖြစ်သည်။
Mario Anaya အားပြန်ပြောပါ